Zvinokwanisika here kutarisa backlinks yako yese neGoogle?
Sezvo tsika dzichiratidzira, mawebsite akafunga kuhaya vamwe vasina mazano veSETO kana kuti mapato evasati vasingazivikanise, maitiro avo anowanzoguma nekodzero dzavo uye yeGoogle zvidhi. Webmasters asina ruzivo anowanzovimbisa vashandi vavo kukura kwekutsvaga nekukurumidza kushandura mazano achishandisa nzira dzepamamiro.
Izvi zvinyorwa zvakazvipira kushandiswa kwema-off-site izvo zvinopiwa zvose zvepamusoro uye zvisingabatsiri uye basa rekudzokera shure mune izvi. Uyezve, tichakurukura kuti zvakashata zvakadini kumashure zvinogona kuchinja nzvimbo yako yewebsite uye mukurumbira.
Ungawana sei zvakashata backlinks?
Wakambombonetseka here kuti zvakashata zvakadini kumashure zvakasiyana nezvakanaka? Mhinduro yakarurama kumubvunzo uyu inowanikwa muhutano hwewebsite yavanoisa. Kudzokorora kwakaderera kunoonekwa nyore nyore. Zvisinei, pane dzimwe nguva unoda kutungamira tsvakurudzo yewebsite kuti unzwisise kuti nei backlinks inokuvadza iwe nzvimbo yako SEO.
Pane dzimwe nzira dzokuti iwe unogona sei kusiyanisa pakati pehupamhi hwepamusoro nehutsika hwakakosha backlinks:
Mazano kubva kune web source izvo zvangotanga kuunza backlinks
) Kana zvikamu zvinowanikwa pawebsite zvakanzwisisika uye zvisina ruzivo rwekutsvakurudza, webhutori yakadaro inogona kushanda kungobatanidza mamwe mawebsite. Kana webhusaiti yakaiswa pa WordPress content management system uye kushandisa TwentyEleven yakashata temaiti, inogona kuva chiratidzo chepasi, chiremera chemaiti yakagadzirwa nechinangwa chokuputira mari yako.
Links kubva kune dzimwe mawebsite
Zvichida wakaona iyi fomu yekuvakwa kwemashoko pamablog. Zvirongwa zvinowanzoita backlinks zvinoshandisa bots kuti zvive nemamwe mawebsite. Aya mazwi anowanzotarisa zvisikwa nekuti maitiro ezvigadzirwa anova akachenjera mumazuva edu. Aya mazwi e spam anogona kuva munhu oga uye anosanganisira zita remunyori. Mhinduro spam links haigoni kuunza kukosha kuhupano hwepachikwata chako.
Linkins iyo yakapoteredzwa nehuwandu hwemashoko, zvinyorwa zvinyorwa
Kazhinji, mawebvu anowanikwa nechinangwa chekubatana kwechikwata ane zvigutsikane zvisinganzwisisiki kana kungoshandisa ikopi kune mamwe mawebsite. Mamwe masangano ekuvaka masangano ekunyengera anonyanya kusimbisa masayiti paanenge achivaka mazano pamusoro pavo uye achipfuura mawanikiti akawanikwa seakakodzera. Kazhinji Google inogona kuiona munguva pfupi uye inopisa mitsamba iyi yewebhu nemitengo. Somugumisiro, iwe uchawana imwezve ye-backlink yepamusoro yepaiti yako.
Nzira yei yekucherechedza zviduku zvemashure?
Muchitsauko chekare, takakurukura kuti tingasanure sei zvakaderedzwa kumashure. Iye zvino, inguva yekufunga kuti ungadzivisa sei hutano hwakashata kuti urege kudzivirirwa doro uye zvikwereti zveGoogle.
Nzira iri nyore ndeyokutaura nemuridzi webhusaiti apo lousy link inowanikwa uye kumubvunza kuti aibvise. Zvichida iwe uchasangana ne webmasters anokukumbira kuti iwe ubhadhara chikwata chako. Muchiitiko ichi, sarudzo yakanakisisa ichave yekuisa disavow zvido zvisina kudiwa neGoogle Link Disavow Tool kana zvisingagoni kubviswa pamunhu Source .